ဗဟုသုတ – Na Pann San
နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု မှာပါဝင်တဲ့ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေး တဲ့ အငယ်ဆုံးသေနတ်သမား(ဂဠုန်ဦးစော ၏ ရုပ်သေးရုပ်)
နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှု မှာ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေး တဲ့ အငယ်ဆုံး သေနတ်သမား။ ဂဠုန်ဦးစော၏ ညီ တစ်ဝမ်းကွဲ ရဲ့ သား။ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကို လုပ်ကြံရန် နောက်ဆုံး အချိန်မှ သူ့ကို ရွေးခဲ့တာ။ သူ့၏ တစောက်ကမ်း စိတ်ဓာတ် ကြောင့် ဦးစောက သဘောကျခဲ့တာပါ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ
ပျောက်ဆုံးနေသော သိကြားမင်း ၏ အရိန္ဒမာလှံတံကြီး ဘယ်ရောက်နေလဲ… သိကြားမင်း သည် ဘီစီ ၆၀၆ ခုနှစ် တွင် ဒဂုန်၌နန်း တက်ခဲ့သည့် ဒဂုန်မင်းဆက် ၏ ၃၂ ဆက်မြောက် ဘုရင် ဥက္ကလာပ မင်းကြီး ၏ ခမည်းတော် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ သိကြားမင်း နှင့် ကြင်ယာတော်
ဒီ သမိုင်းဝင် ဓာတ်ပုံထဲက ဗိုလ်ချုပ်ဘေးက ဆရာတော် ကို.. ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်လား . ဘယ်သူလဲလို့ မေးလာသူတွေ အတွက် ရေးသားဖော်ပြပါတယ်.. .. ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ဦးဆောင်သူတွေ ဖြစ်လာမယ့် သခင်အောင်ဆန်း တို့ဟာ.. တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ခက်ခဲပြီး အမွိုင်မှာ အချိန်ကြာလာနေတဲ့ အချိန်မှာ… .. ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေး က
“ ဝှေခါ ” ကို အဖြေ ရှာ စရာ မလို ပါ…. ဒီ ရုပ်သံကို ကြည့်ပြီး သင့်စိတ်ထဲ မှာ ပြောစရာ တစ်ခုခု ကျန်နေ ပါလိမ့်မယ်…(ရုပ်သံ)
ဝှေခါ ခေါ်’ဆင်ခေါင်းတောင်ကြီး’ ဟာ အခါ အားလျှော် စွာ ရာသီဥတု အခြေနေပေါ် မူတည်ပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို ပြိုကျတတ်ပါတယ် (ရုပ်သံ) ဒီ Video ဖိုင်လေး ကတော့ July 27 , 2019 ကတည်းက ရိုက်ကူး မိထားတာ…ယခု မဟုတ်ပါ…. ဝှေခါ နဲ့ ပြိုကျတာ
ဘုန်းကြီးတသက်နဲ့တကိုယ်မှာ မတွေ့ဖူးတဲ့ သေရင်တောင် ဆွမ်းသွပ်စရာမလိုတဲ့ အလှူရှင် ဒကာကြီး
“” ဘုန်းဘု န်း…ကျောင်း…အရှေ့ဘက် ပိန္နဲတော က ဒကာကြီး ဦးကောင်းက ဘုန်းကြီး နဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့..ဘုရား…”” “” ဘယ် ဦးကောင်း..”” “” တပည့်တော်တို့ ကျောင်းအရှေ့က ပိ​န္နဲတောကလေ…”” “”အဲ့ဒိပိန္နဲေ တာကြီးက လူမေနဘူးဆို..”” “” ဟုတ်တယ်..သူတို့က ရွာတော င်အစပ်က စိုက်ပျိုးရေးခြံထဲမှာ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးနေကြတာ…သားသမီးလဲမရှိဘူး…”” “” ငါ
ချမ်းသာ ချင်ရင် ဖင်မြဲမှ (၁) ကျောက်သူဌေး တယောက်ကပြောဘူးပါတယ် သူ ခုလိုချမ်းသာခဲ့တာ ဖင်မြဲလို့ပါတဲ့ ရှင်းပြအုန်းလို့ ဆိုတော့ ငါပွဲ စားဘတုန်းကပေါ့… ငါကျောက်တူးတဲ့ တွင်းသားကနေ ပွဲစား ပွဲစားကနေ ဝယ်ရောင်း နောက် ကုန်သည်ကျောက်သူဌေးဖြစ်အောင် ပန့်ပိုး ခဲ့တာ ဖင်မြဲ ခဲ့လို့ဘဲ ကွ တွင်းတူးတုန်းက တွင်းထဲမှာ ငါဖင်မြဲတယ်
ထီပေါက်စေ တဲ့ နိမိတ်ပြ အိမ်မက် အိပ် မက်ကို လူတိုင်းမြင်မက် ပါတယ်။ အိပ်တာ နဲ့ မက်တဲ့ အိပ်မက်မျိုးက သွေးလေချောက်ချားပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက်၊ ရှေးယခင်က ခံစားဖူးတာ ကို အကြောင်းပြုပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက်၊ နတ်ဆိုးနတ်ဝါးတွေ လှည့်စားလို့မက်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးရယ် ဟူရယ် အိပ်မက် သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ မိမိတို့
ရှေး လူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေ မှန်ပုံ ကတော့ ဒီနေ့ခေတ်ကို ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်ပြီး ပြောနေသလား မှတ်ရတယ်ဗျာ။ ကွက်တိကို မှန်နေတော့ တာပဲ။ အဲဒါကြောင့် “အတိတ် တဘောင်ဆိုတာ နိမိတ်ဆောင်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံ ပေါ်လာတာ ဖြစ်ရမယ်ဗျ။ ရှေးလူကြီးတွေ ရဲ့ အမြင်စူးရှပုံ ကတော့ ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါလေးတွေ သိနေရင် ကလေးပညာရေး တစ်နှစ်၊ ခြောက်လ၊ သုံးလ နောက်ကျခဲ့တာကို သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဦးမလား….
ကျောင်းသား မိဘအများစုဟာ ကျောင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်။ ကျောင်းဖွင့်နောက်ကျခဲ့ရင် ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ နှောင့်နှေးမှာ ပူပန်နေကြတယ်။ တကယ်ကော…. ကိုဗစ်ကြောင့် ပညာရေးတွေ နောက်ကျသွားမှာလား။ သင့်ရဲ့ကလေးကို အခုအချိန်မှာ….. စာနာထောက်ထားခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို သင်ပေးထားမယ် ဆိုရင်၊ မိသားစုတွေနဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်စွာနေထိုင်တတ်အောင် သင်ထားပေးမယ်ဆိုရင်၊ တီထွင်ကြံဆဉာဏ်တွေ ကောင်းမွန်အောင်၊ စာအုပ်တွေကို ချစ်တတ်သွားအောင်၊ ခံစားချက်တွေကို
ထူးထူးခြားခြား ရေတွေ အောက်ကနေ အထက် ကို ပြန်စီးနေတဲ့ ပြောင်းပြန် ရေတံခွန်(ဗီဒီယို)
အောက်ဆုံးမှာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်…… သဘာဝ တရားကြီး ရဲ့ ဆန်းကြယ်မှု ကတော့ တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ။ ကျွန်တော် တို့တတွေ စကားအဖြစ်ပြောခဲ့ကြတဲ့ နိမ့်ရာက မြင့်ရာကို စီးဆင်းတဲ့ရေ မဆိုဘူး ဆိုတာကိုတော့ ပယ်ဖျက်ကြရတော့ မလိုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရေဆိုတာ တော်တော်များများဟာ မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းကြတာပဲ မဟုတ်လား။